Uzuzu ndị China tụgharịrị South Korea ka ọ bụrụ Ọzara Gobi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ South Korea na -agbasa » Uzuzu ndị China tụgharịrị South Korea ka ọ bụrụ Ọzara Gobi
Na-agbasa News Travel • News • Safety • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ndị South Korea jiri otu uzuzu ruru unyi teta n'ụtụtụ Mọnde mgbe ha si na windo lepụ anya. A na-ekpuchi South Korea site na mbara ọzara nke sitere na ọzara Gobi nke na-abịa site na Mpaghara Mongolian dị na China.
Ndị ọchịchị South Korea nyere ịdọ aka ná ntị ájá na-acha odo odo maka Seoul na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile nke mba ahụ.
Ndị Korea gwara ụmụ amaala ka ha nọrọ n'ụlọ
ETN Reader Maazị Cho na-ekwu, sị: “Mgbe m tetara, ana m ahụkarị ụlọ a n'ụlọ m. Apụrụ m ịhụ ahịrị ugwu dị n'ihu ọtụtụ ụlọ ndị dabara adaba. Mana taa, Seoul nọ na edo edo Uhie njikere. Nke a Uhie kpuchie nlele ugwu ugwu. Ọ na-egosi mkpa ịdị mma ikuku,
Njupụta nke ihe ntụ ntụ dị ntakịrị karịa obere micrometers 10, nke a maara dị ka PM 10, gbagoro n'ogo "dị oke njọ" na mpaghara Seoul ka ukwuu na mpaghara ndị ọzọ niile, ndị ọchịchị kwuru.
N'ihe dị ka elekere iri nke ụtụtụ, elekere elekere PM nke oge ọ bụla ruru 10 microgram kwa mita cubic na Daegu, microgram 10 na obodo ndịda ọdịda anyanwụ nke Gwangju, microgram 1,115 na Seoul na 842 microgram dị n'etiti obodo Daejeon, dị ka gọọmentị na-agba Institutelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe Obibi nke National Institute of Environmental Research.
O doro anya na PM 10 kwa awa rutere na microgram 1,348 n'akụkụ Daegu, ihe dị ka kilomita 300 na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Seoul.
Ndị ikike ihu igwe nọ ebe a na-etinye uche nke PM 10 n'etiti efu na 30 microgram dị ka "ezigbo," n'etiti 31 na 80 dị ka "nkịtị," n'etiti 81 na 150 dị ka "ihe ọjọọ" na ihe karịrị 151 dị ka "ezigbo njọ.
Ọnọdụ PM 10 rutere elu nke 545 microgram na Seoul na ụtụtụ Mọnde, etiti ahụ kwuru, na-ahụ maka Busan na agwaetiti ndịda nke Jeju dekwara ọkwa ọjọọ nke PM 10 ruru 235 na 267 microgram, n'otu n'otu.
Ogo ikuku na Seoul, South Korea
Centerlọ ọrụ ahụ kọwara na mba ahụ dum enwetala mmetụta nke oke ikuku oke ikuku nke sitere na mpaghara Mongolian dị na mgbago ugwu China na ọzara Gobi na Mongolia na Fraịde wee kwaga n'ebe ndịda site na ịnya ifufe northwest.